Healthy Habit – Page4– Healthy Life Journal
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— အရေပြားအပူလောင်တယ်ဆိုတာ ပူတဲ့အရာတစ်ခုခုနဲ့ ထိတွေ့မိတာကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ အလွန်နာကျင်တဲ့ ခံစားမှုဖြစ်ပါတယ်။ အရေပြားဟာ ရေနွေးငွေ့၊ ဓာတုပစ္စည်း၊ မီးစတဲ့ ပူတဲ့အရာတစ်ခုခုနဲ့ ထိတွေ့မိတဲ့အခါ ထိတွေ့မှုအနေအထားအလိုက် အပူလောင်တတ်ပါတယ်။ အပူလောင်မှုအဆင့် အပူလောင်တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အရေပြားထိခိုက်မှုအဆင့်တွေကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရာမှာ သုံးဆင့်ရှိပါတယ်။...
ဆီးသွားတဲ့အခါ မသက်မသာ ခံစားနေရသလား
———၊ ဇွန် ၊——— သင့်အနေနဲ့ ဆီးသွားတဲ့အခါ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ မသက်မသာဝေဒနာတွေကို ခံစားနေရတာက ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း၊ မျိုးပွားအင်္ဂါတဝိုက် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း၊ ဆီးလမ်းကြောင်းကျောက်တည်ခြင်း စတဲ့ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆီးသွားတဲ့အခါ မသက်မသာဖြစ်စေတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းကြောင့်ပါ။ ခံစားရတတ်သော လက္ခဏာများ •...
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— တစ်ရက်မှာ ဦးနိုင်ထွန်းဟာ သူရဲ ့ငါးနှစ်အရွယ်သမီးလေးကို ရွှေရောင်ပါကင်စက္ကူလိပ်တွေ ဖြုန်းတီးတယ်ဆိုပြီး ဆူပူပါတယ်။ သမီးလေးက ရွှေရောင်ပါကင်စက္ကူတွေကို ထုပ်ပိုးပြီး လက်ဆောင်ဘူးလေးတွေ လုပ်နေလို့ပါပဲ။ သမီးလေးက ဆူပူနေတဲ့ဖခင်ကို အရေးမထားဘဲ လက်ဆောင်ဘူးတစ်ဘူးကိုယူပြီး “ဒါက ဖေဖေ့အတွက်”ဆိုပြီး...
—–၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. ဒီနေ့ခေတ်မှာ ကလေးကအစ အသက်ကြီးတဲ့အရွယ်အထိ အာဟာရပြည့်ဖို့ အရေးကြီးတယ်ဆိုပြီး လူပြောများလာကြပါတယ်။ ဘာကြောင့်ပါလဲ။ A. အာဟာရပြည့်မီဖို့ လူတိုင်းအတွက် အရေးကြီးပါတယ်။ အာဟာရက လူတစ်ယောက်ရဲ့ကာယစွမ်းရည်ရော...
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— အလုပ်များတဲ့အတွက် တချို့လူတွေက ပုံမှန်ဝမ်းသွားတဲ့အကျင့်ကို မကျင့်ကြတော့ပါဘူး။ အဲဒီအခါ နောက်ပိုင်းမှာ ဝမ်းချုပ်တဲ့ဝေဒနာ ခံစားလာရတတ်ပါတယ်။ ဝမ်းချုပ်တဲ့ ဝေဒနာကင်းစင်စေဖို့ အမြန်ဆုံး ဝမ်းသွားစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ပျားသံပရာရည်သောက်ပါ ရေနွေးကြမ်းထဲ ပျားရည်၊...